Ukugcwalisa ulwelo kunye nokuTywina umatshini weFektri - China ukuThengisa ulwelo kunye nokuTywina abavelisi bemishini, abaxhasi
Ukuzalisa uLwelo kunye noMatshini wokuTywina i-HGS-240 (P15)
Ukusebenza kunye nenqaku Umthamo omkhulu, isantya esiphezulu, ukuchaneka okuphezulu, kunye nesilawuli sokuhamba esiphakamileyo. Ulawulo lwesantya sokuguqula isantya sokulawula. Ulawulo lweemoto zeServo. Ujongano lomatshini ongumntu. Ukuhanjiswa kwefilimu yeServo. Ukutshintshwa kwesikhombisi kunye nokuhlengahlengiswa kobude kulula kwaye kulula ukusebenza. Zenzekelayo ukhulule, usike ifilimu ukusika nokusonga. Inomsebenzi wokulungelelanisa iphatheni elungileyo kunye nengalunganga kunye nesixhobo sombane. Njengoko emazantsi ebhotile ethe tyaba, inokuma ...
Ukugcwalisa uLwelo kunye nokuTywina umatshini we-HYLGX-2
Umgca wokupakisha we-E-ulwelo Lo mgca wokupakisha uqukethe itafile yokondla ibhotile, umatshini wokugcwalisa, umatshini wokubamba, umatshini wokuphawula. Oku ngokukodwa ukupakisha e-engamanzi. Umgca wonke uyilelwe ngokwemigangatho ye-GMP, onke amalungu anxibelelana nezinto zenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu. Kwaye kusebenza kwiintlobo ezahlukeneyo zeebhotile. Sisixhobo esifanelekileyo kwimichiza yokutya yezamayeza yokutya. Uhlobo lwe-1.Linear, umatshini ngamnye unokuqhuba ngokuzimeleyo, unokuhlengahlengiswa kwi-vario ...
Ukusebenza kunye nenqaku lamkela ulawulo lwe-PLC kunye nolawulo lwesantya esingaguqukiyo sokuhamba kwesantya. Inkqubo yokusebenza njengokukhulula, ukwenza iplastiki, ukugcwalisa, ukushicilela inombolo yebatch, ukubetha, ukubetha kunye nokusika kugqitywa ngokuzenzekelayo yinkqubo. Yamkela isixhobo somatshini somntu-somatshini, esisebenza ngokulula. Ukugcwaliswa akukho thontsizayo, ukubhuza, kunye nokuphuphuma. Iindawo eziqhagamshelana namayeza zonke zamkela izinto zentsimbi ekumgangatho ophezulu, edibana ne-GMP ...